Ndeapi masheya ane njodzi pamusika? Zvimwe zvirevo | Ehupfumi Zvemari
Ehe, mamiriro ezvinhu emari dzeSpanish haana kushata, kwenguva pfupi. Asi nemitengo ine njodzi pamusika wemasheya. Kwete yakanyanyisa euphoric futi, asi inochengetedza maconstant anokutendera iwe chengetedza mari yako nerunyararo rwepfungwa. Zvirinani kana mashandiro ako akanongedzwa kunguva pfupi, kana zvimwe chimwe chinhu kana nzira dzako dzekudyara dzichiwedzera kuchengetedza. Chero zvazvingaitika, pane akateedzana ehunhu hunogona kuita kuti utambe nguva yakaipa chero nguva. Kusvika pandinogona kubuda chikamu chemari yakachengetwa. Wakatarisana nemamiriro ezvinhu aya, unofanirwa kufanonyeverwa uye kudzivirira chero kutenga chero mutengo wavo wakachipa zvakadii panguva ino.
Aya maitiro ane njodzi zvakanyanya uye haapfuure nemamiriro ezvinhu akanakisa panguva ino chaiyo. Iwe unofanirwa kuve, saka, chenjererai kune zvinogona kuitika muzviito zvavo. Hazvishamise kuti iwe une zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Uye uyu musiyano ndiwo unofanirwa kutungamira zviito zvako kubva zvino zvichienda mberi. Iwe haugone kuzorora pasi pechero mamiriro ezvinhu uye kudzivirira kusangana kwavo kuitira kuti varege kuomesa hupenyu hwako muhukama hwako nenyika yemari.
Saka kuti uve neruzivo rwekuti zvinomiririrwa nemitemo iyi chii, hapana zvirinani kunze kwekuona imwe yezano zvine njodzi. Ichave iri zano rakanakisa kubaya nhomba kufumurwa kwakaomarara kwazvo muzviito zvako. Ehe, haisi imwechete kukosha, asi akati wandei uye neakasiyana maitiro. Ivo anosanganisira angangoita ese equity sectors, pasina anosara. Kunyangwe isu tichizongokutsanangurira iwe kune yakakosha mienzaniso yezvinonyanya kutyisa misika yemusika. Usakahadzika kuti iwe uchave nekushamisika kanopfuura kamwe mune iyi sarudzo yatakakugadzirira.
1 Maitiro ane njodzi: nei?
2 Deoleo: matambudziko nemafuta
3 Pakuzivisa neBanco Yakakurumbira
4 Tecnocom: kuva akangwarira zvikuru
5 OHL pamuswe wemakambani ekuvaka
6 Abengoa: zvimwe zvakafanana
Maitiro ane njodzi: nei?
Izvo zvinofungidzirwa kuti chengetedzo ine njodzi ndeye iyo ine yakadzika kwazvo maitiro uye inogona kuikonzera kudzikira zvakanyanya mukati meanotevera ekutengesa zvikamu. Zvakare mune izvo zviitiko rako bhizinesi mamiriro haisi iyo yakanyanya kunaka iwe yaunogona kuunza. Kuzivisa nezve kucheka kuti yavo yemitengo mitengo inogona kutambura. Chero zvazvingaitika, haufanire kuvhura zvinzvimbo chero zvodii. Nechikonzero chekutanga uye icho hapana chimwe kunze kweiyo mari yakawanda iwe yaunogona kurasikirwa nayo. Kunyangwe hafu kana kudarika yemari yakadyarwa.
Ivo vanomiririra njodzi yakakomba kune zvaunofarira muhukama hwako nemari Hazvishamise kuti ivo vanokwanisa kukupa kanopfuura kamwe kushamisika panguva isingatarisirwe. Zvisinei, mamwe emakoshesero aya anozivikanwa zvikuru kwechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Zvese zvekuongorora kwaro kwehunyanzvi uye nenhau dzakatorwa mubhizinesi rayo. Chiitiko chakaipisisa chinogona kuuya nenzira yako ndechekuti iwe une nzvimbo dzakashama mune zvimwe zvezviyero zvekuyera. Nekuti mukuita, ipapo uchave uine dambudziko rakakomba.
Kuti ikubatsire mune iri basa, hapana zvirinani kupfuura kuburitsa pachena kuti ndeapi ane tsika dzakanyudzwa mune ino yakaoma maitiro. Mune zvimwe zviitiko, ivo vanozove vanojairira kwauri, asi zvirokwazvo mune vamwe ivo vanozove kushamisika kuchakwevera kwakawanda kutarisisa. Naizvozvo, idzi ndidzo dzimwe dzetsika dzinopa mamiriro akaipisisa.
Deoleo: matambudziko nemafuta
Kana paine kukosha kunopesana mumubhadharo wepasirese wemari iyo isiri iyo mumwe mugadziri wemafuta. Chokwadi, kuvharwa kweayo maakaundi ebhizinesi gore rapfuura kwaisave kwakaodza moyo kune vese vagovana. Deoleo akarekodha a isina mambure mhedzisiro pa 179 mamirioni euros. Uku kurasikirwa kwakanyanya kukonzerwa nesarudzo yebhodhi revatungamiriri yekunyora kukanganiswa kwemidziyo yemamirioni emamiriyoni e96,3 uye neshanduko mumitemo yemitero.
Haisi nguva yakanaka, saka, yekuvhura zvinzvimbo mukambani. Pasina imwe yezviitiko uye kana iwe ukaiswa mari panguva ino, unofanira kubva nekukurumidza. Iyo yakanaka nguva ichave kana paine kudzokororwa mumitengo yavo. Kunyangwe zvese zvichizendamira pamutengo wekutenga mawakarongedza mashandiro mumisika yemari. Ichave nzira inoshanda kwazvo yekubvisa dambudziko. Hazvishamisi kuti zvicharamba zviri nani kurasikirwa nemaeuro mashoma pane ingangoita zvese zvipo zveupfumi mukukosha.
Pakuzivisa neBanco Yakakurumbira
Vavaki vemabhanga epakati nepakati varasikirwa neinenge 90% yemari yavo. Haisi iyo yakanakisa zvikonzero zvekuisa ichi chinonyengera pane radar. Kwete zvishoma. Kunyangwe zvinoenderana neyako nyowani bhizinesi mutemo, iwe unogona kuchinja maitiro ako mune pfupi kana yepakati term Kunyangwe iri basa chete rakachengeterwa kune vanotya mari kwazvo uye vanoda manzwiro akasimba mumisika yemari. Iyi ndiyo yako here?
Kwete pasina, ine rukudzo rwekupa kumwe kuderera kwakasimba mumusika wenyika unoenderera mumakore achangopfuura. Eheka haisi yakanaka pokutangira yekutanga mashandiro. Uye zvakati wandei nekusaziva kukuru kune zvikamu zvaro zvakanyorwa pamisika yemari. Zvichava zvirinani, nekudaro, kuti iwe usiye zviito zvako kwenguva dziri nani mumutengo wako.
Tecnocom: kuva akangwarira zvikuru
Iko kufamba kwazvino mukugovana kwayo kunoita kuti ienderane senhamba ine njodzi zvikuru kwemwedzi mishoma inotevera. Uye kana ichigona kukupa iwe isinganzwisisike yakanaka kushamisika, haugone kukanganwa kuti ichave yakanyanya kutungamira mukukudziridza kufamba kwakanyanya mumisika. Kusvika pakuti inogona kuve imwe yemakambani kwaunosiya chikamu chakakosha kwazvo chemari yakaiswa mari. Njodzi dzayo dzakapfuura nguva yazvino uye haisi imwe yetsika dzakakurudzirwa kutanga kutora chinzvimbo munguva pfupi.
Zvakapesana neizvozvo, sarudzo yakanakisa yauinayo ndeyekuisa zvikamu zvako kusvikira wamirira nguva dziri nani dzekuwedzera mari. Nhoroondo yave iri yekushomeka kwazvo equity chikumbiro, ne hukuru hukuru mumitengo yavo. Iine misiyano inopfuura inoshamisa pakati pemitengo yayo yakanyanya uye shoma. Izvo havana kuzvifananidza senge imwe nzira iyo inopa tarisiro yakanaka yekuvandudza kudzoka pane kuchengetedza mune chero mamiriro emari. Hazvishamisi kuti iwe une tsika dzine chitarisiko chiri nani. Ose ari mune ayo ehunyanzvi uye akakosha ongororo.
OHL pamuswe wemakambani ekuvaka
Kana paine kukosha kunopa tarisiro isingafadzi yekudyara iyo hapana imwe kunze kwekambani inotungamirwa naJuan Miguel Villar Mir. Matambudziko ako mumaakaundi ako emari Uye kumisidzana kwenhambo nenhambo kwandakapedza kuvaparira hakuite kuti zvive zvakanaka kwazvo kuti ive yemumwe wevanokwikwidza pachikwama chako chechengetedzo kwemwedzi mishoma inotevera. Asi pane izvo zvinopesana, uye edza kugadzirisa zvinzvimbo mune iyo nyaya yekuti iwe watovhura nzvimbo munzvimbo ino yekuvaka.
Mukati mechikamu icho chakanyorwa, maakaunzi ne zvimwe zvinopa mazano uye izvo zvinopa chinonyanya kukosha ongororo zvakare. Uye zvakare, vanopa mibairo inobatsira kwazvo iyo inogona kutungamira kumatanho anosvika ku7%. Chero zvazvingaitika, iyo girafu yakapihwa neOHL haikoke tariro. Icho kunyange chimwe chemuenzaniso mune zviyero izvo zvinogona kukuita iwe kurasikirwa nemazhinji maeuro munzira. Izvo hazvitombokurudziro yekufungidzira mashandiro kana kunyangwe mune imwecheteyo yekutengesa chikamu. Nekuti mukuita, une zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Usakanganwe kubva ikozvino zvichienda mberi kana iwe uchida kupa zvakanyanya kudzivirirwa kune yako yekudyara portfolio.
Abengoa: zvimwe zvakafanana
Iyi kambani inoenderera ichichengetedza imwecheteyo yakaipa maitiro senge mumwedzi yapfuura. Saka zvisingatarisirwe zvekuti haugone kushandisa chero zano. Padivi rakashata, zvinogona kutungamira kumatanho emitengo kwaunorasikirwa nechikamu chemari yako. Izvo hazvina kana basa kunyangwe iwe ukaunza yakawanda ruzivo mumisika yequity. Nekuti mukupedzisira maitiro ayo anogona kutungamirwa mune chero mamiriro, kungave kumusoro kana pasi. Chinhu chipi zvacho chinogona kuitika pachayo rondedzero nekuda kwayo kusimba mamiriro. Zvese zviri zviviri maererano nehunyanzvi hwayo hwekuongorora uye mafambisirwo emakambani ayo anga achipa kune vagovana navo kwenguva yakareba.
Parizvino, hapana nzira yekuongorora maitiro avo kubva pane chero maonero. Pasina margin kuitira kuti iwe utange chero mashandiro mumisika. Iko mukukwanisa kwese kuri kuti hakuregi kudonha nekuda kwematambudziko akakomba emari ane iyo kambani. Iwe hauchafanirwi kuva nezvikamu zvavo kana kuti kugadzirisa musangano nekukurumidza izvo zvinoita kuti kuita kwako kubatsire.
Mune maitiro akafanana pane rimwe rakakosha boka remakambani ayo akanyorwa pane huru yenyika stock indexes. Imwe yemamiririri anomiririra mune ino pfungwa ndeiyi Sniace. Mushure memakore ekusave akanyorwa pamisika yemari. Kunyangwe parizvino asiri kuzvibata zvisirizvo zvachose. Asi chero zvodii, haisi yakajeka kukoka kuvhura nzvimbo.
FCC inogadzirawo kufamba kwakasarudzika kunobatsira kuti ibude mumabasa ako emusika wemasheya. Kana se mune vakawanda veinishuwarenzi kuti havasi kuenda kuburikidza nekunakisisa kwenguva yavo. Zvirinani kana zvasvika pamutengo wemitengo yavo. Iine downtrend iri kuvapa mari kuti vasiye munguva pfupi pfupi yekudyara kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndeapi masheya ane njodzi pamusika? Zvimwe zvirevo
Matipi ekugadzira bhajeti-inochengeterwa bhegi rekuchengetedza